Proclaiming the Word - Novonjena mba hanompo! | Outlines of Messages
Novonjena mba hanompo!
Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy, ary izay itoerako dia ao koa no hitoeran’ny mpanompoko; raha misy manompo Ahy dia hankalaza azy ny Ray. (Jaona 12, 26)
Ny mpanompo dia manaraka ny Tompo: Izay manompo Ahy dia tsy maintsy manaraka Ahy…
Ny Tompo Jesosydia niteny mazava fa ny mpanompo dia manaraka ny Tompo! Tsy ny mpanompo velively no miteny izay tokony haton’ny tompo.
Ny manaraka ny Tompo Jesosy dia tarihin’ny Fanahy Masina; misafidy ny hanaraka ny fahendreny, hiaina ho Azy; hanao izay asainy hatao!
Ny mpanompo ao amin’ny testamenta Vaovao dia ambaran’ny teny grika hoe doulos (andevo). Indraindray io dia midika hoe diakonos (diakona na mpanompo). Marinadaholo ireo, na doulos na diakonos dia teny mitovy dika ireo. Ireo teny roa ireo dia midika fa ny olona iray izay tsy tompon’ny tenany, fa olona novidian’ny tompony. Isika dia novidian’ny Tompo mba hanao izay ilainy.
Asa manao ahoana no apetraky ny Tompo hataontsika? Ny fomba hanompoantsika Azy, dia nilaza Izy fa hahatonga antsika ho mpanompo ny mpanompo namana hafa sy vonona hanao araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra, na inona na inona vidiny, mba hanampy azy.
Ny mpanompo dia hita eny amin’izay hiasan’I Jesosy…izay itoerako dia ao koa no hitoeran’ny mpanompoko.
Ny Raiko dia miasa mandraka ankehitriny, ary Izaho koa miasa. (Jaona 5, 17).
Fa asany isika, voaforona tao amin’I Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. (Efes 2, 10)
Andriamanitra dia miasa ao amin’ny tontolo misy antsika! Isika dia afaka ny handray anjara amin’izay ataony. Ny asa fanompoana dia tsy ho an’ny mpitandrina na ireo izay nianatra teolojia. Raha miandry azy ireo isika dia tsy afaka ny hahavita maro amin’ny asa fanompoana.
Ny mpanompo dia hankalazaina…. Dia hankalaza azy ny Raiko!
Rehefa manompo ny Tompo amin’ny fifaliana, fientanana sy fahazotoana isika dia omen’ny Tompo voninahitra isika. Tsy misy voninahitra azo ampitahaina amin’io. Izay manompo ny Tompo dia omeny voninahitra.
Ilay mpitendry lokanga kalaza, Paganini dia namela ny lokangany tao amin’ny tananan’I Genoa, izay voafetra fa tsy azo ilalaovana izany. Ny hazon’izany zavamaneno izany rehefa lalaovina dia mihasimba tsikelikely, nefa teto izy dia navela fotsiny amin’izao, ka nanomboka niharatsy sy simba. Ny lokanga izay nankafizin’I Paganini dia lasa lanin’ny kalalao fotsiny sy simba noho ny fijanonany tsy niasa elabe. Ny fandavan’ny kristiana hanompo dia mahatonga ny talentany sy ny fanomezam-pahasoavany tsy azo ampiasaina sy lanin’ny kalalao fotsiny.
Ny mpanompo dia manaraka ny Tompo! Ny mpanompo dia hita eny amin’ny sehatra iasan’ny Tompo! Ny mpanompo dia omen’Andriamanitra voninahitra!